Otu Azụmaahịa Gị Nwere Ike Isi Mee Ka Ndị Nleta Weebụ Na-amaghị Ama Na-eduga | Martech Zone
Maka afọ gara aga, anyị anwalela ụzọ dị iche iche maka ndị ahịa B2B anyị iji chọpụta nke ọma ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ. Ndị mmadụ na-eleta saịtị gị kwa ụbọchị - ndị ahịa, ndị ndu, ndị na-asọ mpi, yana mgbasa ozi - mana ọ bụkarị nchịkọta adịghị enye nghọta maka azụmahịa ndị ahụ. Oge ọ bụla mmadụ bịara na ebe nrụọrụ weebụ gị, enwere ike ịchọpụta ọnọdụ ha site na adreesị IP ha. Enwere ike ịnakọta adreesị IP ahụ site na ngwọta ndị ọzọ, njirimara ejiri ya, yana ozi ezigara gị dịka onye ndu.
Fọdụ n'ime ihe ngwọta anyị nwere na-arụ ọrụ site na ochie data, ụfọdụ nwere egwu ihu, ụfọdụ enweghị nhọrọ iji bulie mkpesa ahụ… ọ na-akụda mmụọ. Ọbụna anyị bịanyere aka na nkwekọrịta maka otu ihe ngwọta nke na-emetụbeghị data ha ma ọ bụ interface ha ma ha agaghị ahapụ anyị na nkwekọrịta anyị. Dika ndi fol na Demandbase dere, njirimara ụlọ ọrụ dị aghụghọ karịa ka ị chere.
98% nke ndị ọbịa na weebụsaịtị B2B abanyela ma ọ bụ gbanwee ka ị ghara ịmata ihe ụlọ ọrụ dị na saịtị gị ma ọ bụ ihe ha nwere ike na-achọ. Ngwọta kachasị dị ka Demandbase na-enyekwa ikike ịhazi ọdịnaya dabere na ụlọ ọrụ na-eleta saịtị gị - mara mma.
Companieslọ ọrụ B2B na-ahụ nsonaazụ dị egwu site na iji ọrụ dị ka Demandbase. Ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị yana ọchụchọ metụtara ya nke webatara ụlọ ọrụ ebe ahụ bara uru maka nsonaazụ mbu, ibute ụzọ, yana nghọta n'ihe atụmanya ma ọ bụ ndị ahịa nwere ike na-achọ. Ikike ịhụ data a na ezigbo oge nwere ike inyere ndị otu na-apụ apụ aka ijikọ na atụmanya mgbe oge kachasị dị oke egwu - ka ha na-enyocha ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Ọrụ ndị ọbịa nwekwara ike ịme mkpọsa, bụrụ ndị edere na sistemụ mmekọrịta ndị ahịa (CRM) dịka Salesforce, ọbụnakwa mee mkpọsa na-azụlite. Nke a bụ teknụzụ dị ike nke bara uru itinye ego na ya.
Tags: azụmahịa ip nyochatọghata -edumata ndumata ndị ọbịamụbaa mgbanweMicrosoftnyocha ipmicrosoft Ọnọdụ crmndị ahịaSugarCRMnjirimara webata websaịtịAkwụkwọ ọrụ.comZoho